Kuboshwe owaseLiberia ngelokuqola | Isolezwe
Kuboshwe owaseLiberia ngelokuqola
Isolezwe / 26 July 2012, 10:59am / BAWINILE NGCOBO
ULALE ebaliwe ngoLwesibili owesifazane waseLiberia osolwa ngokuqola owesifazane wakuleli ehlangene nesoka lakhe elisagcwele amathafa.
ZIMKHALELE owesifazane waseLiberia osolwa ngokuqola owesifazane waseMpangeni u-R12 000 ehlangene nesoka lakhe, bemthembisa ukuthi kunezimpahla ezisemkhunjini echwebeni laseThekwini a abafuna ukuzilanda bese beyamkhokhela.
Lo wesifazane uboshwe ngoLwesibili ntambama eWimpy maphakathi neTheku ngesikhathi benesoka lakhe sebezolanda u-R80 000 kulo wesifazane ngoba bethi imali ababeyithathile incane sekufuneka enye.
Umsolwa wesilisa ukwazile ukubaleka emuva kokuthi ethathe isikhwama ebesigcwele amaphepha, abezitshela ukuthi sinemali.
Lo wesifazane oqoliwe ongathandanga ukudalulwa uthe uqale wahlangana nomsolwa wesilisa eya emhlanganweni eSouth Beach.
“Wangibingelela wathi ucela ukukhuluma nami, ngathi ngijahile. Wabe esebona ngifake irosali wathi naye uyikholwa usuka eSudan kuyaliwa, benodadewabo beqile bagibela umkhumbi osechwebeni eThekwini,” kuchaza lo wesifazane.
Uthe lo msolwa ube esethatha inamba yakhe.
“Ubeselokhu efona nje kwaze kwathi ngoJulayi 19 wafona ngathi akeze eMpangeni. Wafika wangibekela udaba lwakhe lokuthi kunezimpahla zabo ezikulo mkhumbi abafika ngawo manje badinga u- R12 000 ukuthi bayozilanda. Uma engabanika bazomkhokhela ngoba banemali emkhunjini futhi banezimpahla eziningi,” kuchaza lo wesifazane.
Uthe ngakusasa weza eThekwini esephethe le mali wahlangana nalaba bobabili bagcina beye ngasechwebeni, uma sekufanele behle lo wesilisa wathi abasale uzohamba yedwa.
“Kwadlula isikhathi eside engabuyi, wafona wathi asiye eSpringfield ngoba lezi zimpahla zikwenye ikhonteyna ekhona. Kwathi sesikhona wabuya nesutukesi elilodwa wathi akakwazi ukuthola ezinye izimpahla ngoba kufuneka enye imali kwakungashiwo u-R12 000 kodwa u-12 dollars okusho ukuthi badinga u-R80 000 ngaphezulu,” kuchaza lo wesifazane.
Uthe waqala lapho ukusola ukuthi kukhona okushaya amanzi wabe esexhumana namaphoyisa ngoLwesibili bacushelwa umgoga, kwaboshwa owesifazane, owesilisa wakwazi ukubaleka.
UCaptain Khephu Ndlovu wamaphoyisa eThekwini uthe lo wesifazane ubekwe icala lokweba esebenzisa amanga, uzovela eNkantolo namuhla.
Amaphoyisa asathungatha umsolwa wesilisa.
Khonamanjalo kuboshwe owesilisa oneminyaka engu-27 ngoLwesibili ntambama emuva kokuhlwitha abantu abebekhipha imali emshinini waseCapitec amakhadi abo asemabhange maphakathi nedolobha. UNdlovu uthe lo msolwa ubanjwe emuva kokuthi uphiko lweCrime Prevention eDurban Central lulandele umkhondo wakhe.
“Ngesikhathi eboshwa kutholwe amakhadi evile ku-20 asemabhange nama-credit cards. Uzovela enkantolo kusasa (namuhla),” kusho uNdlovu.